युरोपा लिगमा आजदेखि क्वार्टरफाइनलका खेल हुँदै, को–को भिड्दैछन् ? | दमक अनलाईन Daily Update
युरोपा लिगमा आजदेखि क्वार्टरफाइनलका खेल हुँदै, को–को भिड्दैछन् ?
युरोपको दोस्रो ठूलो क्लब फुटबल प्रतियोगिता युरोपा लिगमा आजबाट क्वार्टरफाइनलका खेल हुँदैछन् । जसमा क्वार्टरका ४ खेल आज राति एकैदिन हुनेछन् । आज राति पहिलो लेगका खेल सकिएपछि दोस्रो लेगका खेल आगामी अप्रिल १८ तारिखमा हुनेछन् ।
आज राति हुने खेलमा इंग्लिस क्लब आर्सनल र इटालियन नापोली भिड्दैछन् । यो खेल आर्सनलको घरमा हुनेछ । अर्को खेलमा पराग्वेको क्लब स्लाभिया प्रहा र इंग्लिस क्लब चेल्सी भिड्दैछन् । यो खेल स्लाभियाको घरमा हुनेछ ।
तेस्रो खेलमा पोर्चुगिज क्लब बनेफिका र जर्मन क्लब आइन्ट्र्याच फ्रान्कफुर्ट भिड्दैछन् । यो खेल बेनफिकाको घरमा हुनेछ । आज हुने अन्तिम खेलमा दुई स्पेनिस क्लब भिल्लारियल र भ्यालेन्सिया भिड्दैछन् । यो खेल भिल्लारियलको घरमा हुनेछ ।
युरोप लिगका यी ४ वटै खेल एकै समय राति १२ः४५ बजेबाट सुरु हुनेछन् । खेल सोनी नेटवर्कका च्यानलबाट लाइभ हेर्न सकिनेछ ।
Previous ‘हेडिङ गोल’मा रोनाल्डोको अपत्यारिलो रेकर्ड !
Next ट्विटरका सीईओको एक बर्षको तलब १५५ रुपैयाँ